प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अस्वीकार गरेका थिए राजाले दिएको पदक Canada Nepal
काठमाडौं - संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले घोषणा गरेको पदक विवादमा परेको छ । मापदण्डविपरीत आफूनिकट व्यक्ति र शक्ति रिझाउने गरी निर्णय भएपछि पदक विवादमा परेको हो । धेरैले पदक नलिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
पदक पाउनेमा बहालवाला न्यायाधीशहरू नै परेपछि न्याय वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले 'सेटिङ' को आशंका गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने न्यायाधीशहरू नै पदक पाउने सूचीमा परेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले 'सेटिङ' को आशंका गर्दै राम्रो सन्देश नजाने भन्दै पदक फिर्ता लिन न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको बाहक मानिने न्यायाधीश अझ त्यो पनि बहालवालालाई नै पदक दिएपछि संविधान र कानुनका जानकारले असन्तुष्टि जनाएका छन् । फिर्ता लिन न्यायमूर्तिलाई अपिल गरेका छन् । नेपाली न्यायिक इतिहासमा 'आइकोनिक' प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले उहिल्यै राजाले दिएको पदक अस्वीकार गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा‍. पूर्णमान शाक्य ‘अन ड्युटी’ न्यायाधीशलाई कार्यावधि नसकिएको बेलामा पदक दिनु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् । ‘किनभने न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ । सरकार पक्ष भएको मुद्दामा फैसला गरेको कारणबाट उनीहरूलाई पदक दिने किसिमको पद्धति सुरु भयो भने त्यसले स्वच्छ न्यायपालिकालाई कहाँ पुर्याउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
नेपालको न्यायालयमा काम गरेका न्यायाधीशहरूले राष्ट्रको हितमा कार्यकालभरि गरेको कामको मूल्यांकन गरेर सेवानिवृत्त भएपछि सम्मान गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘जब उनीहरूबाट सरकारको पक्ष विपक्षमा निर्णय दिन सक्ने क्षमता रहँदैन, त्यतिबेला उनीहरूले विगतमा गरेका कामकुराको सही मूल्यांकन गरेर राष्ट्रले पदक सम्मान गर्दा एउटा अर्थ रहन्छ,’ उनले भने, ‘तर उनीहरू पदावधि रहँदा भविष्यमा सरकारको पक्ष विपक्षमा मुद्दा परिरहन्छ । तिनीहरूलाई यसरी तक्मा दिँदा उनीहरूले कत्तिको निष्पक्ष न्याय गर्न सक्छन् ? प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अस्वीकार गरेको उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य न्यायाधीशहरूले पदक ग्रहण गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । न्युज कारखाना
कतिपयले यो निर्णयलाई न्यायालय रिझाउने सरकारी रणनीतिका रूपमा पनि टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल न्यायाधीशलाई पदक दिने सरकारी निर्णय संविधानको स्पिरिटविपरीत भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार राजाले पदकको प्रस्ताव गर्दा विश्वनाथ बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीश थिए । पछि उनी प्रधानन्यायाधीश भए । पदीय मर्यादा र नैतिकताको सीमामा बसेर उपाध्यायले पदक नलिएको दाहालको बुझाइ छ ।न्युज कारखाना
आश्विन ३, २०७८ आइतवार २२:०२:५३ बजे : प्रकाशित